အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီး Resorts ရထားဖြင့်သွားရောက်နိုင်ရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီး Resorts ရထားဖြင့်သွားရောက်နိုင်ရန်
အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီး Resorts ရထားဖြင့်သွားရောက်နိုင်ရန်
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
တစ်ဦးညင်ညင်သာသာရွေ့လျားရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်ကျသွားနှင့်သင့်လိုရာခရီးမှာနောက်တစ်နေ့နံနက်နှိုးထက်မပိုကောင်းသောခံစားမှုရှိတယ်, တောင်စောင်းကနေမျှသာမိနစ်. ဥရောပမှာ, ရထားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုိုအပ်သည်. ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး နေ့ချင်းညချင်းခရီး skiers အဘို့ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်. အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုခင်းကျင်းရှိပါတယ်သင်သည်ထိုခရီးအတူနေ့ခင်းဘက်ရထားလမ်းခရီးသွားနေဖြင့်အနေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, တံခါးကို-to-တံခါးကို, အကြောင်းကိုများမှာ ပျံသကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်း.
နှင်းလျှောစီးရထားသွားရောက် resorts 1 – WENGEN, ဆွစ်ဇာလန်
၏အခြေစိုက်စခန်းမှာ အဆိုပါဒီကဗျာ Jungfrau တောင်တန်း Wengen ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ Bernese Oberland အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အယ်လ်ပိုင်းရွာ. ရွာ၌တည်းခိုသည့်အခါအတိတ်နဲ့တူခံစားရသောအရာကိုသို့အဆင့်. ဤသည်မှပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကလေးတွေယူဆောင်လာ နှင့်အတူ၎င်း၏မိသားစုဖော်ရွေခံစားရနှင့် ကီးတွေကတော့. မဟုတ်နှင်းလျှောစီးသို့? ပြဿနာမရှိပါဘူး! non-နှင်းလျှောစီးလှုပ်ရှားမှုများ "လေယာဉ်ခရီးစဉ်-ကိုမြင်လျှင်" ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပါဝင်ပါသည်, ဧလိ-နှင်းလျှောစီး, အဖြစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်း၏ 20km, ရှစ်ရေခဲပြင်ဒိုးပစ်ကိတ်ကွင်း, toboggan ပြေးနှင့်မိုင်.
သုံးအပန်းဖြေ, Grindelwald, Wengen, နှင့် Murren, အဆိုပါ Jungfrau ဒေသဆိုင်ရာဓာတ်လှေကား pass ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. ဆောင်းရာသီပါပဲ အိပ်မက်အတွေ့အကြုံ!
ရထားနဲ့: သင့်ထံမှနှင်းလျှောစီးရထားသွားလာနိုင်ပါတယ်နေစဉ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စိန့်. Pancras Eurostar နဲ့ Wengen တို့မှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်. သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူခရီးသွားနေပါလျှင်, ကျနော်တို့ Bern သို့မဟုတ်ဇူးရစ်ဖို့လေယာဉ်လာပြီအကြံပြု. ထိုအရပ်မှ, Interlaken Ost ရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Lauterbrunnen မှ Bern မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရထားဆက်သွယ်မှုယူ. ခရီး၏နောက်ဆုံးနည်းနည်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် သာရထားလမ်းအားဖြင့် Lauterbrunnen ထံမှ့ကြာ 15 မိနစ်များ.
ဇူးရစ် Wengen မှရထား
ဂျီနီဗာ Wengen မှရထား
Wengen ရထားမှ Bern
နှင်းလျှောစီးရထားသွားရောက် resorts2– မည်, သြစတြီးယား
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအပါအဝင်မပါဘဲနှင်းလျှောစီးဖော်ပြထားခြင်းနိုင်ပါတယ် သြစတြီးယား? အဆိုပါ SkiWelt ဒေသ, အထူးသဖြင့်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်! Soll ၏ရွာ အတူ dotted နှင်းလျှောစီးပြေး၏ 284km ဂုဏ်ယူ 77 တော Alpine တဲနှင့် apres ဘား. တညဉ့်နှင်းလျှောစီးပြီးနောက် Wilder ခိုင်ဆာတောင်တန်းကျော်အမြင်များနှင့်အတူသောက်ပျော်မွေ့. ဟုတ်ကဲ့, သင်ညာဘက်ကိုဖတ်ရှု. အရမ်း Hexenritt နှင့် Monde မှာဥရောပတိုက်တွင်အရှည်ကြာဆုံး floodlit toboggan ပြေးအချို့ကိုခံစားကြည့်ပါ!
ယင်းအပေါ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စိန့် Pancras ထွက်ခွာမည် 15:04 ဘရပ်ဆဲလ်မှ Eurostar, ရောက်ရှိလာ 18:05; ယင်းယူ 18:25 Cologne မှဘရပ်ဆဲလ်ကနေ ICE, ရောက်ရှိလာ 20:15; ထို့နောက်ယူ 21:21 Worgl မှ NightJet အိပ်ပျော်ရထား, ရောက်ရှိလာ 08:36; ထိုအရပ်မှကအကြောင်းဖွင့် 20 ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီအားဖြင့်မိနစ်.
စုစုပေါင်းခရီးအချိန်: 16 နာရီ 22 မိနစ်များ.
ရထား Worgl မှ Graz
ရထား Worgl မှ Salzburg
ရထား Worgl မှဗီယင်နာ
ရထား Worgl ဖို့ Cologne
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရထားစိတ်ကူး – Sauze d'Oulx, အီတလီ
သငျသညျနှင်းလျှောစီးမှာကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်, ထိုအခါ ရထားဖြင့်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများ အဆိုပါဖွစျလိမျ့မညျ Sauze d'Oulx ဧရိယာ. ဘယ်အချိန်မှာမိုဃ်းပွင့်ရေတံခွန် သစ်ပင်များကိုအကြားအမှုန့်လယ်ကွင်းတကယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့ရောက်. ရွာအတွင်းလေထုပျော်စရာနှင့်ကြိုဆိုပွဲနှင့်ဖြစ်ပါသည် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း အဟောင်းကို cobbled လမ်းကယ့်ကိုဖြည့်စွက် လှပသောထိ အဆိုပါစွန့်စားမှုရန်.
ထွက်သွား လန်ဒန် အပေါ်စိန့် Pancras 9:24 ပဲရစ် Nord မှ Eurostar ဖြစ်၏, ဘူတာရုံကိုတက္ကစီပြောင်းပါ, နှင့်ယူပါ 2:41 ညနေ ပဲရစ်-လိုင်ယွန်ထံမှ TGV Oulx မှ, ရောက်နေပြီ 7:23 ညနေ. အဲဒီမှာကနေဖွင့် 15 ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီအားဖြင့်မိနစ်.
လက်ခ် du Bourget ၏ကျယ်ပြန့်ကြက်၏အမြင်များ, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးများထဲမှ ရေကန်များ.
ရထား Oulx မှမီလန်
ရထား Oulx မှတူရင်
ရထား Oulx မှဂျီနိုအာ
ရထား Oulx မှ Parma
သငျသညျပြီးသားဖူး သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး? ကောင်းသော! ထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ခရီး၏အခက်ခဲဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့. သင့်ရဲ့ရထား booking မျှသာမိနစ်ကြာလိမ့်မည်, admin ရဲ့အဖိုးအခမပါဘဲ! ဘာအပျော်အပါး! အလည်အပတ် ရထားတစ်ခုသိမ်းဆည်းပါ ယခုနှင့်တစ်သက်တာ၏အားလပ်ရက်စာအုပ်ဆိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fski-resorts-visit-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#နှငျးလြှော europeantravel europetravel longtrainjourneys နှင်းလျှောစီး မိုးပွင့် ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား
ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ဥရောပခရီးသွား, U.S.A သွားလာပါ
ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစပျစ်သီး Stores ဘာတွေလဲ
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား